Nodorana tany Toamasina II fa tsy may : tonga any anaty vilanin’ny mponina ny vary lo | NewsMada
Nodorana tany Toamasina II fa tsy may : tonga any anaty vilanin’ny mponina ny vary lo
Par Taratra sur 13/12/2017
Tsy may tanteraka ireo vary simba sy lo nodorana, ny alatsinainy hariva teo. Vokany, nifandrombahan’ny mponina any Antanandava Toamasina II, noraofina sy nandrahoina indray ireo vary ireo.
Io tokoa àry! Araka ny efa nahiana ny fomba nandorana an’ ireo vary miisa 1.019 kitapo, ny alatsinainy teo, teny Antanandava, distrika Toamasina II. Tsy may tanteraka ny ampahan’ ireo vary simba sy efa lo ary maloto natao tao anaty lavaka. Vokany, nirotsahan’ny mponina tao anaty lavaka ary nifandrombahina noraofina indray ireo vary sisa tsy may. Izany hoe, niafara tany anaty vilanin’ny mponina indray ireo vary lo sy efa simba.
Tsy nazava ny fomba nandoran’ny tompon’andraiki-panjakana ireo vary ireo. Tratra alina ny fotoana nanaovana azy, tsy ampy ny kitay ary mety tsy niraraka tsara koa ny solika nentina nandorana izany. Hanamarinana izany, tsy may ny tany amin’ny fanambanin’ireo vary ka tsy nananosarotra ny nakan’ny mponina azy.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana koa fa nalalaka ny toerana satria toa niaraka niala tamin’ny mpitandro filaminana ny olona niandraikitra ny fiambenana ny toerana, nanomboka tamin’ny 8 ora alina.
Tsy midina ny vidim-bary
Hatreto, tsy hita taratra amin’ny vidin’ny vary eny an-tsena akory ny fanambaran’ny minisitry ny Varotra sy ny fitondrana ankapobeny fa ho fehezina ny vidim-bary. Lazaina fa tsy tokony hihoatra ny 72.000 Ar sy 73.000 Ar ny vidin’ny iray kitapo amin’ny 50 kilao amin’ny vary hafarana avy any ivelany (stock). Nambara koa fa tokony ho 1.500 Ar-1.600 Ar ny kilao hividianan’ny mpanjifa azy eny amin’ny mpivarotra antsinjarany. Ny hita anefa, manodidina ny 2.500 Ar hatramin’ny 3.000 Ar ny kilao eny amin’ny mpaninjara ho an’ny vary “stock”.
Amin’ny ankapobeny tsy sahirankirana intsony ny mponina fa tena sahirana. Nihevitra ny mponina sy ny tantsaha fa hiaina kely hiatrehana ny fety ny vola azo avy amin’ny vokatra letisia, saingy tsy nahavaha olana.